Amb, Yuusuf Bari bari oo ku geeriyooday weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Amb, Yuusuf Bari bari oo ku geeriyooday weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama
27th March 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com-Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Xarunta Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey ee magaalada Geneva Amb. Yuusuf Maxamed Ismaaciil (Bari bari) ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen galabta Hotel Maka Al-Mukarama.
Sida ay sheegayaan wararka Danjire Yuusuf Bari bari ayaa ku geeriyooday isbitaalka Madiina, markii uu si xun ugu dhaawacmay toogasho ka dhacday gudaha Hotelka, markii ay gudaha u galeen dabley hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab.
Allaha u naxariistii Yuusuf Bari bari ayaa horay u soo noqday afhayeenka Madaxweyne C/llaahi Yuusuf xilligii dowladdii lagu soo dhisay Mbaghati, isagoo sidoo kalena noqday Safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Midowga Yurub.
Tirada Dhimashada ayaa ka badan todobo ruux oo horay laamaha caafimaadka ay xaqiijiyeen, waxaana la soo warinayaa khasaare dheeraad ah, maadaama howl galku soo gaaray ilaa fiidnimadii caawa.
Wariye ku sugan Hotelka Maka Al-Mukarama ayaa soo sheegaya in ciidamada ammaanka iyo dableydii hubeysneyd ay saacado ku dagaalamayeen dabaqa kore ee Hotelka, waxaana jiray dad la bad baadiyay oo isugu jiray mas’uuliyiin iyo diblomaasiyiin.
Dadka qaar ayaa dariisha ka booday, kuwana jaran jaro ayaa loogaga soo saaray dabaqa labaad ee hotelka oo ay isugu tageen dadkii ka badbaaday toogashada.
Illaa iyo hadda waxaan kala cadeyn tirada dableyda weerartay Hotelka, iyadoo weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaadiid ayaa lagu qarxiyay dhabarka dambe ee hotelka.
Hotelka Maka Al-Mukarama ayaa saddex goor oo hore waxaa lagu qaaday weeraro aan guuleysan, balse weerarkii maanta ayaa ah mid ka duwanaa weeraradii horay u fashilmay oo ugu dambeeyay kii horaantii bishan ka dhacay banaanka hotelka.
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Sharma-sheekh ee dalka Masar (Sawirro)